CABLE Glands nke ndị na-emepụta na ndị na - ebubata ya - China CIBLE GLANDS Factory
Naịlọn Cable Gland (Metric / Pg / Npt / G thread)
A na-ejikarị eriri USB eme ihe iji jikọta, dozie, chebe eriri ndị ahụ na mmiri na ájá. Ha na-ebe-etinyere dị otú ahụ ubi dị ka akara mbadamba, ngwa, ọkụ, n'ibu akụrụngwa, ụgbọ okporo ígwè, Motors, oru ngo wdg
Maka eriri USB naịlọn, anyị nwere ike ịnye gị isi awọ (RAL7035), isi awọ (Pantone538), isi awọ miri emi (RA 7037), nwa (RAL9005), acha anụnụ anụnụ (RAL5012) na ndị ọzọ dịka ịchọrọ.
Anti-mgbaji ọkpụkpụ naịlọn USB gland (Metric / Pg / G eri)
A na-ejikarị eriri USB eme ihe iji jikọta, dozie, chebe eriri ndị ahụ na mmiri na ájá. A na-etinye ha n'ọrụ na mpaghara ndị dị ka bọọdụ njikwa, ngwa ngwa, ọkụ, akụrụngwa akụrụngwa, ụgbọ oloko, motọ, ọrụ wdg. Anyị nwere ike ịnye gị glands nke isi awọ (RAL7035), isi awọ (Pantone538), isi awọ (RA 7037) ), nwa (RAL9005), acha anụnụ anụnụ (RAL5012) na agba ndị ọzọ dịka ịchọrọ.
A na-ejikarị eriri USB eme ihe iji jikọta, dozie, chebe eriri ndị ahụ na mmiri na ájá. A na-etinye ha n'ọrụ na mpaghara ndị dị ka bọọdụ nchịkwa, ngwa ngwa, ọkụ, akụrụngwa akụrụngwa, ụgbọ oloko, motọ, ọrụ wdg. Anyị nwere ike ịnye gị glands nke isi awọ (RAL7035), isi awọ (Pantone538), isi awọ (RA 7037) ), ojii (RAL9005), acha anụnụ anụnụ (RAL5012) na eriri ikuku na-egosi radieshon nuklia.
Metal USB gland (Metric eri)
Anyị nwere ike ịnye gị glands eriri igwe maka eriri mkpuchi ejiri ọla nickel-plated (Iwu Mba.: HSM-KZ), igwe anaghị agba nchara (Iwu No.: HSMS-KZ) na aluminom (Iwu Mba.: HSMAL-KZ).
Anyị nwere ike ịnye gị eriri USB nke EMC nke ejiri ọla kọpa nickel (Iwu Mba.: HSM-EMV.T), igwe anaghị agba nchara (Iwu Mba.: HSMS-EMV.T) na aluminom (Iwu Mba.: HSMAL-EMV. Nkem)
Anyị nwere ike ịnye gị gland cable EMC nke nickel-plated brass (Iwu Mba.: HSM-EMV.SC), igwe anaghị agba nchara (Iwu Mba.: HSMS-EMV.SC) na aluminom (Iwu Mba.: HSMAL-EMV. SC)